किन बन्द हुँदैछ प्रहरीको हैटी मिसन ? – SamajKhabar.com
किन बन्द हुँदैछ प्रहरीको हैटी मिसन ?
संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: १६ पुष २०७५, सोमबार ०५:४१
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको हाइटीस्थित राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन आगामी अप्रिलदेखि बन्द हुने भएको छ । हाल हाइटीमा खटिएको फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपियू) को टोली नै अन्तिम हुने जानकारी राष्ट्रसंघले नेपाल प्रहरीलाई गराएको छ । प्रहरीले बन्दोबस्तीका सामान फिर्ताका लागि तयारीसमेत थालिसकेको छ । साथै हाइटी मिसनका लागि अघि बढाइएको नाम छनोट प्रक्रियासमेत रोकिएको छ । हाल हाइटीको एफपियू मिसनमा १ सय ४० प्रहरी खटिएका छन् ।
हाइटीमा द्वन्द्व समाधानउन्मुख भएकाले राष्ट्रसंघले शान्ति सेनालाई कटौती गर्दै लगेको हो । सोहीअनुसार यसअघि नै ‘अनपोल मिसन’अन्तर्गत कोटा कटौती भइसकेको छ । क्यारेबियन देश हाइटीमा सन् २००४ देखि शान्ति स्थापनार्थ नेपाल प्रहरीको टोली खटिँदै आएको छ । एफपियू हाइटीमा हालसम्म तीन हजार ७० प्रहरीले काम गरिसकेका छन् । हाइटी र सुडानमा गरी नेपाल प्रहरीका दुईवटा मात्र एफपियू मिसन छन् । हाइटी बन्द भएपछि सुडान मिसन मात्र हुने भएकाले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा जाने अवसर प्रहरीका लागि कम हुने भएको छ । शान्ति मिसन प्रहरीका लागि आकर्षक मानिन्छ ।
१६ पुष २०७५, सोमबार ०५:४१ मा प्रकाशित